Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 7)
Nokia 8.2 5G: kuwani waa qeexitaankiisa farsamo; qiimaha ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday
Tilmaamaha farsamada iyo astaamaha qaar ee Nokia 8.2 oo leh 5G isku xirnaanta ayaa la siidaayay, iyo waliba qiimaha suuragalka ah.
Tani waa sida Motorola's Moto G8 ay ugu muuqato sawirradeeda la turjumay
Motorola's Moto G8 ayaa lagu daadiyey sawiro cusub oo la muujiyey kuwaas oo muujinaya dhamaan qiimaha naqshadeynta taleefoonada dhexe.
Redmi Note 8 Pro wuxuu helayaa dhibco kamarad hooseeya oo ku saabsan DxOMark
DxOMark wuxuu qiimeeyay nidaamka kamaradaha ee afar geesoodka ah ee 64 MP ee Redmi Note 8 Pro wuxuuna sharaxay dhamaan xoogiisa iyo daciifnimadiisa.
Motorola Edge Plus wuxuu soo maray gacmaha Geekbench oo leh Snapdragon 865 iyo 12 GB oo RAM ah
Jaangooyada caanka ah ee Geekbench ayaa ka diiwaan galisay Motorola Edge Plus keydkeeda xogta Snapdragon 865 iyo 12GB oo RAM ah.
Nokia waxay soo saari kartaa taleefankeeda casriga ah ee isku laabma sanadkan
Xan cusub ayaa tilmaamaya in taleefankii ugu horreeyay ee isku laaban ee ka socda Nokia iyo HMD Global la soo saari karo sannadkan.
Bandhigga POCO X120 ee 2Hz ayaa si rasmi ah loo xaqiijiyay
POCO, iyada oo loo marayo qalab xayaysiis ah oo hadda la daabacay, ayaa shaaca ka qaaday in shaashadda POCO X2 ay tahay 120 Hz.
Xiaomi waxay si weyn u yareyneysaa qiimaha Redmi K20 Premium
Xiaomi waxay go'aansatay inay hoos u dhigto qiimaha Redmi K20 Pro Premium ee Aasiya si ay u dhammayso saamiyada uguna dabaal degto Sannadka Cusub ee Lunar.
ZTE wuxuu ka caawiyaa China Telecom inay sameyso 5G baaritaanka fog ee cudurka Coronavirus Pneumonia
Shirkadda 'ZTE Corporation' iyo laanta Sichuan ee Shiinaha Telecom waxay sameeyeen baaritaankii ugu horreeyay ee 5G ee Shiinaha ee cudurka sanbabada ee Coronavirus
iQOO 3 waa magaca astaanta soo socota ee astaanta
Xog cusub ayaa soo bandhigtay magaca calanka soo socda ee iQOO, nooca casriga ah ee casriga ah ee Vivo. Kani waa iQOO 3.
OnePlus wuxuu faahfaahinayaa wax walba oo ku saabsan habka ay u leedahay kamaradaha mustaqbalka ee casriga ah
OnePlus ayaa ka wada hadlay oo ka wada hadlay dhowr qorshaheeda qorshooyinka ku saabsan kaamirada hagaajinta mobilada iyada oo loo marayo adeegsadayaasheeda iyadoo loo marayo New York OEF.
Cusboonaysiinta Android 10 ee imanaya Huawei Y9 2019
Hadal rasmi ah oo rasmi ah oo lagu soo diray Twitter qaab jawaab ah, Huawei wuxuu xaqiijiyay Android 10 ee Y9 2019.
Xiaomi oo ka dhan ah Coronavirus! Waxay xireysaa bakhaaradeeda jireed ee Shiinaha si gacan looga geysto xakameynta cudurkan faafa
Shirkadda Xiaomi ayaa soo saartay bayaan rasmi ah oo ay ku sheegayso in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 28-ka bisha Jannaayo ay albaabada isugu dhufatay bakhaaradii ay ku lahaan jirtay Shiinaha sababo la xiriira Coronavirus
Kuuskuus ka soo baxa shaashadda Motorola RAZR waxay noqon doonaan caadi, sida uu sheegayo soo saaraha
Tallaabo sababi karta isbeddel ku yimaada xiisaha isticmaalayaasha, Motorola waxay ku andacooneysaa in shaashadda RAZR ay noqon karto mid buurbuurnaan leh iyadoo loo isticmaalo si caadi ah.
HMD Global waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Nokia 9.2 PureView cusub
HMD Global waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Nokia 9 Pureview cusub oo la yiraahdo Nokia 9.2 Pureview waxayna arki doontaa iftiinka bilaha soo socda.
Realme 3Cs, waa bartamaha xiga ee dhowaan suuqa soo gali doona
Moodel Realme oo leh nambarka nambarka RMX2020 (Realme C3s) ayaa waxaa caddeeyay US FCC saacado yar ka hor.
Xiaomi waxay ku faantaa faa'iidooyinka MIUI 11 marka la barbar dhigo MIUI 10
Xiaomi waxay xaqiijineysaa dhammaan hagaajinta la socota MIUI 11, oo ah nooca ugu dambeeya ee ku-xirnaanta ku saleysan Android ee soo saaraha Shiinaha uu bilaabay.
Telefoon cusub oo Motorola ah oo ay ku daadanayso waxyaabo farshaxan ah
Sawir ah taleefan cusub oo Motorola ah oo wata stylus optical ah ayaa la soo daadiyay, wuxuu noqon lahaa noocii ugu horreeyay ee la yimaada muuqaalkan.
LG G9 ThinQ, maxaan ka filan karnaa calanka xiga
LG G9 ThinQ waa gubasho marxalado kahor soo bandhigideeda rasmiga ah. Shirkaddu waxay aragtay macluumaad ku saabsan markabkeeda daadanaya.
Redmi 8A waxaa lagu arkay Geekbench oo ku shaqeeya Android 10
Geekbench wuxuu liistada Redmi 8A ku taxay nidaamka keydka ee Android 10, isagoo ku dhawaaqaya cusboonaysiinta cusub ee suurtogalka ah.
OxygenOS 10.3.1 waxay timaadaa OnePlus 6 / 6T oo leh hagaajin badan
OnePlus 6 iyo OnePlus 6T waxay helayaan cusbooneysiintii ugu dambeysay ee OxygenOS, nambarka nooca 10.3.1. Waxay ku timaaddaa hagaajinno badan.
LG wuxuu ku dhawaaqay cusbooneysiinta Android 10 ee 9 ka mid ah taleefannadeeda casriga ah
Sagaal moodooyinka casriga ah ee LG ayaa heli doona cusbooneysiinta Android 10, sida ku xusan ogeysiiska rasmiga ah ee ay shirkadda sameysay.
Motorola waxay diyaarineysaa daabacaad 5G ah oo ah taleefankeeda casriga ah ee isku laaban Razr
Motorola waxay soo saari doontaa nooc ka mid ah Razr 2019 oo leh processor aad u awood badan oo leh modem 5G ah oo la jaan qaadaya shabakadaha xawaaraha sare ku cusub.
Kani waa kiniinka cusub ee Lenovo ee lagu soo saaray Snapdragon 450
Lenovo M10 FHD REL waa magaca kumbuyuutar cusub oo casri ah oo soo saaraha ah kaas oo hadda loo heli karo iibsashada iyada oo loo marayo Flipkatr.
Oppo Find X2: tani waa wax walba oo cusub oo muhiim ah oo soo daatay ay ka leedahay moobiilka
Qof u dhuun daloola Shiinaha ayaa daabacay warbixin uu ku faahfaahinayo dhowr ka mid ah muuqaalka Oppo Find X2 iyo tilmaamaha farsamo.
10-ka casriga ah ee ugu awooda badan bisha Diseembar 2019, sida laga soo xigtay AnTuTu
Halbeegga 'AnTuTu benchmark' wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan bisha Diseembar 2019. Waxaan halkaan kugu tuseynaa!
Motorola's Moto G7 Plus wuxuu bilaabaa helitaanka Android 10
Cusbooneysiinta Android 10 ee loogu talagalay Motorola Moto G7 Plus ayaa bilaabatay in laga helo Brazil, marka waa inaysan waqti dheer qaadan in la gaaro dalalka intiisa kale.
Laba taleefan oo cusub oo Oppo ah ayaa booqday Geekbench oo ay la socdaan Snapdragon 765 iyo Helio P90
Waxay u muuqataa in Oppo uu diyaarinayo labo taleefan oo casri ah. Tan waxaa lagu muujiyey liisaska cusub ee ku yaal barxadda baaritaanka Geekbench.
Sony Xperia 5 wuu ka fog yahay inuu ahaado taleefanka casriga ah kamaradda ugu fiican dhammaantood, sida laga soo xigtay DxOMark
Dhamaadka ugu sareeya ee Sony Xperia 5 waxaa qaatay DxOMark si ay u qiimeeyaan waxqabadka kamaradeeda dhinac kasta oo suuragal ah.
Honor wuxuu leeyahay 100 dareemayaal kamarad MP ayaan loo baahnayn
Honor, soo saaraha Shiinaha ee gacanta Huawei, ayaa sheegay in dareemayaasha kamaradaha ee 100 MP ama ka badan runtii aan loo baahnayn.
Beddelka Pocophone F1 ayaa la xaqiijiyay in la sii deyn doono bisha Maarso
Maareeyaha Guud ee POCO Manmohan Chandolu ayaa ku dhawaaqay in dhaxalka Pocophone F1-ka sare la sii deyn doono bisha Maarso.
Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa soo mariya shahaadada TENAA
Telefoon cusub oo Oppo ah ayaa soo dhex maray FCC oo muujinaya faahfaahin farsamo oo fara badan ka hor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin sanadkan 2020.
Maamulaha Guud ee POCO, sumadda cusub ee madaxa bannaan, ayaa ka hadlaysa qorshayaasha shirkadda
C Manmohan, oo ah Maamulaha Guud ee POCO, oo ah nooca casriga ee casriga ah ee ka madax banaan Xiaomi, ayaa ka hadlay qorshayaasha shirkadda.
OnePlus 8 Pro wuxuu ku faani doonaa taageerada ku-dallaca wireless-ka
Nooc kale oo casri ah oo heer sare ah oo la soo saaray sanadkan ayaa ah OnePlus 8 Pro.
Daahfurka ZTE Axon 10s Pro 5G wuxuu ku soo dhowaanayaa xawaare dhakhso leh: tan waxaa lagu muujiyey shahaadada Wi-Fi
ZTE's casriga casriga ee soo socda ee waxqabadka sare leh, oo ah Axon 10s Pro 5G, ayaa ka soo muuqday keydka Wi-Fi Alliance.
Realme X2, 2, 3, 3i iyo C1 waxay helayaan cusbooneysiin cusub oo leh cusbooneysiin nabadgelyo iyo kuwo kale
Realme waxay soo bandhigeysaa cusbooneysiin cusub oo dhowr ah oo qalabkeeda ah. Moodooyinka nasiibku waa Realme X2, 2, 3, 3i iyo C1.
Kaamirada 708 MP Sony IMX48 waa mida ay yeelan doonto Oppo Find X2
Macluumaad cusub oo hadda soo if baxay ayaa soo jeediyay in kamaradda ugu weyn ee Oppo Find X2 ay tahay 708 MP Sony IMX48 lens.
Honor V30 Pro wuxuu kujiraa sida casriga labaad oo leh kamarada ugufiican darajada DxOMark
Sharafta sare ee 'Honor V30 Pro' ayaa iskeed isu taagtay iyada oo ah tafoonka casriga ee ugu fiican kamaradda qiimeynta DxOMark.
Pocophone F1 wuxuu helayaa xasilloonida Android 10 OTA
Telefoonka casriga ah ee loo yaqaan 'Pocophone F1 smartphone game' wuxuu durbaba helayaa casriyeynta barnaamijka ee ku daraya xasilloonida Android 10 hoosta MIUI 11.
Liiska cusub: kuwani waa moodooyinka Huawei ee u qalma nooca caalamiga ah ee EMUI 10
La kulan liistada cusub ee Huawei casriga ah ee heli doona cusbooneysiinta barnaamijka EMUI 10 ee caalamiga ah.
Redmi K30 Pro: kuwani waa qeexitaanadooda ku taxan Geekbench
Astaanta Redmi K30 Pro waxaa ku taxay Geekbench keydkooda oo ay weheliyaan dhowr astaamo iyo tilmaamo farsamo.
Huawei waxay siisaa horumariyeyaasha $ 26 milyan si ay ugu horumariyaan barnaamijyadooda dukaankeeda
26 milyan oo doolar ayaa ah lacagta miiska loo saaray horumariyeyaasha si ay u bilaabaan abuurista barnaamijyada barnaamijkooda deegaanka.